Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan. Wadaday u Mareen !
Q2aad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan. Wadaday u Mareen !
Waxaan kusoo gunaanadnay Q1aad ee maqaalkan cutubka ah; Itobiya inay ka kororsatay Waaya-aragnimo dhismihii Maxaakimta iyo wixii ka dambeeyay, oo aanay fursad dambe siinin inuu abuurmo urur Somali ah oo ka madaxbanaan Itobiya. Sidoo kale, in aanu ka dhex muuqanin dalka qof Somalinimo aaminsan oo doonaya inuu soo nooleeyo dawlad Somaliyeed oo midaysan oo ka madaxbanaan Itobiya. Waxaan sheegnay oo hubaal ah in Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) ay ku guulaysatay inay noqoto urur ka madaxnabaan dhanwalba Itobiya isla mar ahaantaana halgan hubaysan ka wada Ogadenya oo looltan adag kula jira Itobiya. Su’aasho waxay ahayd, siday arintaa ugu suurtagashay ONLF.
Waxaa iyadu dhab ah oo aanay laba ku murmaynin in dagaal dhanwalba ah ay Itobiya ku soo qaaday kuna qaadayso JWXO say uga saarto saaxada ama uga dhigto magac u yaal ay ku adeegato sida kooxihii is-dhiibay. Bal inta aanan ka jawaabin su’aasha ah; Siday ugu suurtagashay ONLF inay noqoto ururka kali ah ee ka madaxbanaan Itobiya, waxaa fiican inaan dibu yarehe jaleecno mashaariicdii Itobiya ay u dajisay ururka ONLF si loogu soo duwo tubta la mariyay gabi ahaan Somali. Kamahadlayno dagaalka uu ciidanka Itobiya kusoo qaaday jabhadda laga bilaabo 1994 ee ilaa hadda socda iyo qorshaha gumaysiga Itobiya ee ku dhisan xasuuqa shacabka iyo barakicinta dadweynaha. Waxaan filayaa inuusan jirin qof ku doodi kara Itobiya dagaal dhab ah lama galin ONLF, oo dhambaalkii uu safiirka Mareykanka Mr. Yomamoto uu xukuumadiisa uga soo diray Adisababa ayuu ku sheegay in Xisbiga TPLF ee Itobiya xukumo uu aaminay in ONLF ay ku socoto wadadii ay ku rideen xukunkii Dergiga sidaa daraadeed ayna go’aansadeen inay burburiyaan ONLF inta aanay helin taageero balaadhan, sida ku qornayd dhambaalka ; (“Because, the government of Ethiopia’s core Tigrean People’s Liberation Front (TPLF) sees in the ONLF an image of itself two decades ago when it overthrew the brutal communist Derg regime, Prime Minister Meles [Zenawi] and his Chief of Defence Force, General Samora Yonus, consider it vital to eliminate the ONLF before this insurgent group gains wider support,” Ambassador Yamamoto sums up.) Go’aanka Itobiya midkaa ayuu ahaa, gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2007dii.
Hadaba marka laga yimaado goobaha dagaalka iyo dhibaatada ay ku haysay/hayso dadka shacabka oo hadafka ka dambeeya uu yahay in taageerada shacabka uu u hayo ururka la tirtiro, waxay Itobiya bilowday dagaal ku wajahan;
1- Ururka Dhexdiisa.
2- Dawladaha caalamka, gaar ahaan kuwa dariska nala ah.
Dagaalkaa 3ex xagalka ah ee Itobiya ay qorshaysay inay kula dagaalanto ONLF, kharash xooganna ay u diyaarisay ma’ahayn mid sahlan, hasa ahaatee JWXO waxay kaga gudubtay si xirfad leh oo ku dhisan Aqoon, Adkaysi iyo Tala-saarashada Ilaahay. Hadaan tusaale ka bixino midwalba, anagoo inta badan u dayn doona waqtiga taariikhda ururka iyo halganka la qori doono, qorshaha Itobiya u dajisay ururka dhexdiisa inay kula dagaalanto waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa;
1aad – In madaxda ururka qaar la kasbado ka dibna ay Itobiya kula dagaalanto Ururka.
Arintan waxay ka mid tahay hubka ugu khatarsan ee ururada lagula dagaalamo si look ala dhantaalo awooda ururka ee dhan walba leh, isla mar ahaantaana laga mashquuliyo hadafkii ururka. Muddo ayay diyaarinaysay Itobiya qaar ka mid ah xubnaha ururka oo masuuliyada kala duwan hayay, kuwaasoo markay ugu talagashay ku dhawaaqay in la doortay Gudoomiye Cusub oo la casilay Gudoomiyihii hore ee ONLF Maxamad C. Cismaan. Isla markaa waxay la tageen idaacadii RX isagoo waqtigaa uu masuul ka ahaa Salaaxudiin Macaw. Muddo yar ka dib waxay barnaamijii ahaa Gudoomiye cusub ayaa la doortay u badshay Itobiya inuu noqdo laba garab oo ONLF ayaa abuurmay. Sababtoo ah midkaa hore way adagtahay inuu socdo oo macna badan ma keenayo. Ka dibna waxay bilaabeen inay soo saareen bayaano ku hadlaya magaca garabka ay ugu yeedheen JWXO/garabka badbaadada sida midkan;
Iyada oo Maskaxda lagu hayo soo jireenkii dheeraa ee Halgankan ayna ujeedaddiisu ahayd in ay Shacabkani ku helaan Aayo ka talin, Cadaalad, Xuquuqdooda oo la Dhawro iyo Dimuqraadiyad, loona Jawaabayo Codsigii Madax Dhaqameedyada Ogaadeenya ee ku salaysnaa Wada Xaajood dhex mara Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya Guud ahaan isla markaana ay Dawlada Itoobiya Ogolaatay kuna baaqday, sidii laga sii daayey Ideecada BBC-da 17 July,2005, Waxay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadenya,Garabka Badbaadinta Halganku soo jeedin arimahan;
Waxaanu diyaar u nahay soona dhaweyn Wada Xaajood dhex mara Jwxo, iyo Dawlada Itoobiya,kaas oo mid ku dhisan keenina kara Xal Waara oo Shacabka, sidoo kalena waxaanu sheegi in aanu ogolaanay Baaqii Odayada Dhaqameedyada Ogaadeenya.
Si looga gudbo Colaada iyo Iska Horímaaka, loona Muujiyo niyo Sami iyo Wanaag, uuna u jiro Jawi nabadeed oo lagu wada hadlo, waxaanu soo jeedin Xabad Joojin dhankanaga, anagoo ku dhawaaqayna, Waxaanuna u soo jeedin labada dhinac ee kale in ay na raacaan.
Haddii Wada hadaladu suuro galaan si Xal loogu gaadho ayna u jirto dhinac dhex dhexaad u ah dhinacyada kale oo isu soo jiida,waxaanu soo jeedin Dalka Sweden oo runtii dhex dhexaad u ah dhamaan Qaybaha,khibro dheera u leh Qadiyadaha noocan oo kale ah Xalintooda,anagoo dhinacyada kalena ka cosan in ay nagu raacaan.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadenya,Garabka Baadbaadada, JWXO-GB
Itoobiya iyadoo adeegsanaysa calaaqaadkeeda dawliga ah iyo dhaqaaleba ayay u dhex oroday warbaahinta caalamka in aad looga maqlo ONLF oo laba garab u kala jabtay iyo waliba inta badan ay raaceen garabka lamagac baxay Badbaadada. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ay qorayeen shabakadaha qaarkood sidan;
Garabka uu hogaamiyo gudoomiyihii hore ee ONLF, Maxamed Cumar cismaan, ayaa la waayey wax lagala hadlo warka ay Itobiya sheegtay, khilaaf iyaga dhexdoodayaal awgiis.
Arinta intaa kuma aanay ekaanine waxay Itobiya sii abaabushay inay sii kala baxaan kooxdii ku midaysnayd Badbaadada oy laba garab sii noqdaan si loo yidhaahdo way sii kala dhaqaaqayaan. Waxaa ka mid ahaa arimaha laga qoray arintaa;
Dhinaca kale, C/weli Xuseen Gaas oo isna sheegtay inuu madax ka yahay garab kale oo ka tirsan ONLF ayaa VOA-da mar uu la hadlayay sheegay inuu yahay garab sadexaad oo ka tirsan ONLF, wuxuuna labada garab ee kale ku eedeeyay kuwo aan matalin jabhadda ONLF.
Faarax Cabdisamad oo wax ka qora arrimaha gobollka Soomalida Ethiopia ayaa sheegay in kala googa’a ku yimid ONLF ay faaiddo ugu jirto dowladda Ethiopia.
Qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso warbixin ka hadlaysa kala qeybsanaanta ONLF
2aad – Waxaa garab socday dacaayaddan ah waa kala jabeen ONLF oo saddex garab ayaa jira, iyadoo Itobiya ay jabsatay e.mail-ada qaar ka mid ah xubnaha oo shabakadaha kasoo horjeeda ururka lagu soo qoro warqadaha ay xubnaha iyo madaxda ururka is-weydaarsanayeen. Warqadahaa oo qaarkood ay sirdoonka Itobiya u qorayaan hab ah inay helaan marwalba sirta ONLF. Ujeedada ay Itobiya ka lahayd wuxuu ahaa inuu xubnaha ka dhex abuurmo kala shaki oo waliba madaxda qaarkood lagu eedeeyo inay la shaqaynayaan garabyadaa kasoo horjeeda halganka ee Itobiya ay ku shaqaysato. Ma ahayn arin sahlan, gaar ahaan in dadweynaha laga dhaadhiciyo inuusan wax jira ahayn ama la fahamsiiyo ujeedada ka dambaysa. Waxaase looga gudbay si fiican, khibradna waa laga kororsaday iyo in la jufeeyo hadday jireen duleelo isha la saaro (peepholes).
3xaad- Waxaa intaaba garab socday dacaayadii caadiga u ahayd Itobiya ee Somalida ay kula dagaalami jirtay. Taaso ahayd buun-buuninta Qabyaalada. In halganka laga dhigo mid uu wado hal qabiil ama ay ka dhex jirto ururka dhexdiisa eex iyo qabyaalad oo lasoo qoro hebel ayaa sidaa loo galay. Waxaan la soconaa hadalkii uu idaacadaha siiyay Meles Zenawi uu ku kala tilmaamayay qabiilada daga Ogadenya iyo qabiilada uu yidhi halganka ayay kasoo horjeedaan ama taageeraan.
4aad- Arimahaa iyo kuwa badanoo kale markay waxba ka qaban waayeen qorshihii loo dajiyaya ururka, waxay u gudbtay marxaladii ahayd inay soo xareeyaan Salaaxudiin iyo dad qurbaha ka imanaya oo lagy tilmaamo inay yihiin xubnihii ururka oo dadweynaha gudaha jooga iyo caalamka dibadda looga faa’idayasto. Waxay ahayd marxaladii heshiis saxiixidda iyo waxaa soo xarooday garabkii ugu weynaa ONLF. Waxaad ka garan kartaa istraatiijiyada Itobiya ugu talagashay barnaamijkan, warka ay saxaafadda caalamka u gudbisay oo Itobiya ay ku bixisay kharashka sidii loo baahin lahaa. Shabakadda VOA ayaa sii daysay warkan;
Dowladda Ethiopia iyo jabhadda ONLF garabka uu hoggaamiyo Eng. Salaaxudiin Macow ayaa maanta heshiis nabadeed ku saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Guddoomiye-ku-xigeenka ONLF ee garabka Salaxudiin, Maxamed Faarax Colow ayaa VOA u sheegay in qodobada lagu heshiiyay ay ku jiraan in cafis loo fidiyo dhamaan dadka ka tirsan ururka ONLF iyo in la sii daayo maxaabiis ka tirsan ONLF oo ku xidhan xabsiyada dalka Ethiopia.
Intaa kaliya ma’ahayne waxaa loo sawiray oo saxaafadda caalamka laga gaday in garabka saxiixay heshiiskan uu yahay midkii xooga badnaa, oo kuwa diidan heshiiskanna ay yihiin inyaroo dibadda joogta.
Heshiiskan waxaa ka horeeyay midkii sida aadka ah ay Itobiya u buun-buunisay ee Somalida qaybaha Itixaad/Ictisaam ay aadka u maalgaliyeen. Waa heshiiskii Ibraahim Dheere uu saxiixay.
Qorshaha Itobiya ee ku saabsanaa heshiisyada waa taariikh aad looga dharagsan yahay, qoraalo badanna laga sameeyay ujeedada ay Itobiya ka lahayd iyo siday u maalgalisay Itobiya. Waxaa muhiim ah inaan sheegno inuu ururka JWXO oo isku duuban ay fashilyeen qorshahaa iyo hadafkii laga lahaa.
5aad- Waxaa kaloo ka mid ahaa qorshaha cadawga in lagu handado xubnaha ururka iyo taageerayaasha iyo dhaq-dhaqaaqa jaaliyadaha, eheladooda gudaha ku nool oo ama lasoo xidho oo lala soo hadaksiiyo iyagoo ku dhibaateysan xabsiyada. Ka dibna looga dhigo madax furasho inay ka baxaan ururka ama joojiyaan hawlaha ay ka dhex wadaan jaaliyadaha. Sidoo kale in la handado dadka gudaha ku nool marka la ogaado inuu jiro qof dibadaha jooga oo ka mid ah taageerayaasha amah awl-wadeenka halganka. Arintaa dhaqan xumada ah waa mid ay u adeegsadaan gumaystayaasha oo aan kala soocin oo isku mid ay ka yihiin agtooda midka kasoo horjeeda iyo midka u adeegaya iyo midka aan intaaba ku jirinee doonaya inuu iska noolaado.
6aad- Waxaa ku xigay oo soo afjarmi doona goor aan fogayn falalkii argagixinta lahaa ee Itobiya ay ka fulisay xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinkaKenya. Ujeedada ay Itobiya ka leedahayna aad ayaa loo falanqeeyay oo hadda uma baahna kusoo celin dheeraad ah. booliskaKenyaiyo Dambi-baadhista dalkaa ayaa aad uga hadlay oo xog farabadan ka helay dambiilayaashii ay dadweynaha soo qabteen.
Arimahaa iyo kuwa kaloo badan marka la’isu geeyo, waxaan odhan karnaa Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay ku guulaysatay inay fashisliso dabinadii Itobiya u daadisay, meesha ay ku dhaceen dawladii Somaliyeed ee maamulka dawladnimo iyo xoriyadda soo ahayd 30ka sano.
La Soco qaybaha Dambe iyo Qorshihii Itobiya ee ku wajahnaa Caalamka iyo Jaaliyadaha.